बंगलादेशले पहिलो हिन्दु प्रधानन्यायाधीश सिन्हालाई देश निकाला गरेको खुलासा ! - Everest Dainik - News from Nepal
बंगलादेशले पहिलो हिन्दु प्रधानन्यायाधीश सिन्हालाई देश निकाला गरेको खुलासा !
बंगलादेशका पूर्वप्रधानन्यायधीश एस के सिन्हालाई त्यहाँको सरकारले देश छोडेर जान दबाब दिएको छ । बीबीसी हिन्दीसँगको विशेष कुराकानीमा उनले देश छोड्नु मुख्य कारण नजरबन्द र परिवारलाई आएको ज्यान मार्ने धम्की भएको बताएका छन् ।
२०१७ मा उनको परिवार अस्ट्रेलिया बसाई सरेका छ भने उनी कुनै अज्ञात देशमा रहेको बताउँदै आएका छन् । उनी वर्तमान बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसीना सत्तामा आएपछि बंगलादेशका प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस नेपालको लगातार दोस्रो हार
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सिन्हाले भरखरै प्रकाशित गरेको किताब ‘ए ब्रोकन ड्रीम : रूल अफ ल, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रैसी’ मा पनि यो विषय उल्लेख गरेका छन् ।
अन्र्तवार्ताका क्रममा उनले कुनै समाय भारत आएर सबै कुरा उजागर गर्ने बताए । उने भने, ‘मैले बंलगादेशमा न्यायपालिकाको पारदर्शिता तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिको विषय उठाएको थिएँ । कानूनको शासन र न्यायप्रणालीको सुधार गर्ने मेरो कदम सरकार र इंटेलिजेन्स एजेन्सीहरुलाई मन परेन । मलाई एक प्रकारले घरमै नज़रबन्दमा राखियो । परिवारलाई धम्की दिइयो । मलाई देश छोड्ने धम्की आयो र अन्त्यमा देश निकाला नै गरियो ।’
याे पनि पढ्नुस बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पार्टी भारी बहुमतसहित विजयी
भारतसँग सीमाना जोडिएको सिलहट प्रान्तका स्थायी घर भएको सिन्हाले आफ्नो पुस्तौनी घरमा जासूसी गर्न सक्ने संयन्त्र बिछाएको दावी गरे । उनका अनुसार, बंगलादेश वार ट्राइब्यूनलका विषयमा सुनवाई भइरहेको थियो । यतिबेलै चरमपन्थीहरुले उनको घर बमले उडाउने योजना बनाएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकप क्रिकेटः बंगलादेश बन्यो एसियाबाट विजेता हुने पहिलो टोली
शेख़ हसीना सरकारले सिन्हाले आफ्नो किताबमा उल्लेख गरेका तत्थ मन गढन्ते कथा भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ ।
-नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी संवाददाता
ट्याग्स: Bangladesh, Sk Sinha